Tababare Solskjær oo ku faanay in SHANTAN ciyaaryahan ay shaqo fiican ka qabsan karaan kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
Tababare Solskjær oo ku faanay in SHANTAN ciyaaryahan ay shaqo fiican ka qabsan karaan kooxda Paris Saint-Germain
(Manchester) 11 Feb 2019. Macalinka reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa Manchester United uusan hoos u dhac ku imaan doonin kulanka ay habeen dambe Talaadada kula ciyaari doonaan PSG tartanka Champions League.
Manchester United ayaan la kulmin wax guuldaro ah tan iyo markii shaqada si ku meel gaar ah ula wareegay tababare Solskjær, kadib ceyrintii Jose Mourinho
Tababare Solskjær ayaa wareysi uu bixiyay kahor ciyaartan wuxuu kaga hadlay:
“Waa inaan dib u soo nooleynaa qaab ciyaareedka kooxda Manchester United”.
“Uma maleenayo in kooxo badan ay ku riyaaqeen imaatinkooda garoonka Old Trafford, marka aan si fiican u ciyaareyno”.
“Waxay wax walba ku xirin yihiin kalsoonida nafteena, hadii aad i weydiiso macalimiintii ka hor yimid tababare Sir Alex Ferguson, waxaad heleysaa in qaab ciyaareedkiisa uuu ku saleysan xawaaraha iyo xakameynta”.
“Waxaan heystaa seddex weeraryahan ee aad u wanaagsan, kuwaasoo kala ah Rashford, Anthony Martial iyo Romelu Lukaku, sidoo kale waxaan heysanaa Alexis Sanchez iyo Jesse Lingard, waxayna la sharad tami karaan difaacyada kooxda PSG”.
Intaas kadib 45 jirkan ayaa wuxuu dib u xasuustay xusuustiisii taariikhiga ahayd ee tartankan xiisha badan ee Champions League wuxuuna yiri:
“Habeenkii ugu fiicnaa ee xirfadeyda ciyaareed kubada cagta wuxuu ahaa tartanka Champions League”.
Waxaa xusid mudan in Ole Gunnar Solskjær uu ka caawiyay kooxdiisa Manchester United sanadii 1999, ku guuleysiga saddexleyda taariikhiga ee kala ah, Premier League, FA Cup iyo Champions League.
“Vinícius Júnior marna kuma xasuusn karo xidigii hore kooxda Real Madrid” - Jorge Valdano